တိုက်​ပွဲ​ခေါ်သံ 1 (Original Story By @thatkozaw) — Hive
တိုက်​ပွဲ​ခေါ်သံ 1 (Original Story By @thatkozaw)
thatkozaw (58)in #myanmar •3years ago (edited)
မ​နေ့က drug war ဂိမ်း vesion (V1) က​နေ (V2) ကိုစတင်​ဖွင့်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
Vesion အသစ်​​ပြောင်းတယ်​ဆို​တော့ ထပ်​တိုးလာတာ​တွေ၊ ​ပြောင်းလဲသွားတာ​တွေ ရှိလာတာ​ပေါ့။ Drugwar V2 ​မှာ ထပ်​တိုးပါလာတာ​တွေက​တော့ Drugwar User ​တွေ ​ဘယ်​လိုကြီးလဲ၊ ဘယ်​လို လာမှာလဲ ​ဆိုပြီး ​စောင့်​စား​နေတဲ့ battle mode ပါဝင်​လာပါတယ်​။
​နောက်​ပိတ်​ထားတဲ့ unit ဖြစ်​တဲ့
(ရိုက်​တာက​တော်​​တော်​ ​အော်​တာကပိုကျယ်​တယ်​)ဆိုတဲ့ unit အ​သေးစား
ယခင်​ unit ​တွေဖြစ်​တဲ့ Bouncer၊ Knifer၊ Gunman တို့မှာလည်း ​ဈေးနှုန်း​ပြောင်းလည်းသွားသလို attack၊ defence ​တွေ ယခင်​နဲ့မတူ​ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်​။ ယခု​ဈေးအတိုင်းပဲ ဝယ်​ရ​တော့မှာမို့ မ​ဖော်​ပြ​တော့ပါဘူး။
​​ပြောင်းလဲမှုအ​နေနဲ့ web design က လုံးလုံး​ပြောင်းလဲသွားပါတယ်​။
အားနည်းချက်​အ​နေနဲ့ ယခင်​လို mobile​တွေမှာ မိမိတွင်​ရှိ​သော drugs weapons ahcohols ပမာဏကို​တော့ လွယ်​လွယ်​ကူကူမ​တွေ့ရပါဘူး။ ​ဘေး​ထောင့်​နားက menu နိပ်​ပီးမှ မိမိ profile ထဲကိုဝင်​ကြည့်​ရပါတယ်​။
Profile ထဲမှာ​တော့ D W A ပမာဏအပြင်​ မိမိ Army ပမာဏ Building ​တွေရဲ့ Level ​တွေ မြင်​ရပါတယ်​။
တဖက်​လူရဲ့ profile ကို​တော့ battle>history
Leaderboard တို့မှာ ဝင်​ပီး ကြည့်​လို့ရနိုင်​ပါတယ်​။
Battle စဖွင့်​ပီဆိုတာနဲ့ ကျ​နော်​အတူတူ အားလုံးက တိုက်​ချင်​​နေကြတာများပါတယ်​။
ကျ​နော်​​ပြောချင်​တာလည်း battle အ​ကြောင်းပါပဲ။
မနေ့က​တော့ နည်းနည်းစီစမ်းတိုက်​ကြတာ​ပေါ့။ ကျ​နော်​လည်း @domelay ကို​ချော့​ပြောပီးတိုက်​ကြည့်​တာ​ပေါ့။
အဲ့ကျမှသိတယ်​ ​ကုန်​သွားတဲ့ unit နဲ့ ပြန်​ရတဲ့ resources မမျှတာကိုပဲ။
battle မှာ Fight, History နဲ့ Find Targets
Fight မှာ​တော့ဖြင့်​ မိမိတိုက်​ချင်​တဲ့သူကို နာမည်​သိရုံနဲ့ ​ရေးပီးတိုက်​လို့ရပါတယ်​။
သို့​သော်​ သူ့ရဲ့ Units ပမာဏ၊ Resources ပမာဏကိုကြည့်​လို့မရပဲ တိုက်​ရမှာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ အဆင်​မ​ပြေသလို လိုင်း​ကောင်း​ကောင်းလဲလိုပါတယ်​။ အ​တော်​ကြာတတ်​လို့ပါ။
တိုက်​ပုံတိုက်​နည်းက​တော့ မိမိတိုက်​ပွဲအတွင်း​ခေါ်လို​သော Unit ကို ပမာဏ​ရေး add ကိုနိပ်​ထည့်​၊
နာမည်​​ရေး၊ out gun အစရှိသဖြင့်​ မိမိဆန္ဒရှိတာ​ရေးထည့်​
ထို့​နောက်​ History ထဲကိုသွားကြည့်​လိုက်​ပါ။
Battle တစ်​ပွဲအတွက်​ 10မိနစ်​ မှ 20မိနစ်​ အတွင်း ခဏ​စောင့်​ဆိုင်းရပါတယ်​။
ထိုအချိန်​အတွင်းမှာ မိမိတိုက်​မယ့်​ရန်​သူကို တခြားသူက တိုက်​တာလည်း ကြုံရတတ်​ပါတယ်​။
ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ History ထဲ ​ရောက်​ရင်​​တော့ တိုက်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
မှာက​တော့ မိမိကိုလာတိုက်​တာ​တွေ မိမိကတိုက်​တာ​တွေ၊ နိုင်​တာ ရှုံးတာနဲ့ Unit ​ကုန်​ဆုံးမှု၊ Resources ရရှိမှု၊ ကုန်​ဆုံးမှု​တွေ ပြသထားပါတယ်​။ မိမိကို လာတိုက်​တဲ့သူကို လက်​စား​ချေမည့်​သူဆိုလည်း သူ့ profile ထဲလွယ်​လွယ်​ကူကူ ဝင်​ကြည့်​ ဝင်​တိုက်​လို့ရပါတယ်​။
က​တော့ မိမိနဲ့ Drug ထုတ်​လုပ်​မှုပမာဏတူညီတဲ့ Player ​တွေကို ပြသထားပါတယ်​။ Profile ထဲဝင်​ကြည့်​ပီး Army အင်​အား Resources အ​ခြေ​နေကိုကြည့်​ပီးတိုက်​ကြရမှာပါ။
တခုရှိတာက မိမိဝင်​ကြည့်​စဉ်​ Army မရှိလို့ Attack လုပ်​လိုက်​​ပေမယ့်​ ထိုသူက လိုင်း​ပေါ်မှာရှိပီး တိုက်​တာကိုလည်းသိရင်​​တော့ဖြင့်​ Unit ထုတ်​ဖို့ အချိန်​ 10 မိနစ်​ရတာကို​တော့ သိထားပါ။
ဥပမာ မိမိက Army မရှိဘူးဆိုပီး Rowdy 10​ယောက်​​လောက်​ပဲလွတ်​လိုက်​​ပေမယ့်​ ထိုသူက ချက်​ချင်း Gunman 5​ယောက်​​လောက်​ထုတ်​ပီး ပြန်​ကာနိုင်​ပါတယ်​။
တိုက်​မယ်​ဆိုရင်​ အ​ပေါ်က ​ပြောခဲ့သလိုပဲ ရန်​သူရဲ့ Armys ကိုကြည့်​ပါ။ Resources ကိုကြည့်​ပါ။ Resources ကိုကြည့်​ရာတွင်​ အစိမ်း​ရောင်​ဖြင့်​​ရေးထား​သော safe ပမာဏထက်​​ကျော်​လွန်​​ရပါမယ်​။ ထို safe ပမာဏထပ်​​ကျော်​လွန်​​တောင်​မှ ပို​နေ​သော Resources ရဲ့ 30% ခန့်​သာ ရမည်​ဟု မှတ်​ထားပါ။
Drug War အ​ကောင့်​မှာ​ရေးထားတာက​တော့ 30%-75% ရနိုင်​တယ်​​ရေးထား​ပေမယ့်​ ကျ​နော်​​တော့မရဖူး​သေးပါ။
ထို 30% ရရှိ​သော Resources သည်​ မိမိသုံးစွဲရမည်​ဖြစ်​​သော Unit ဝယ်​ရ​သော Resources ​လောက်​​တောင်​မရ​နိုင်​ရင်​​တော့ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​ဆက်​ရှာပါ။
ဖြစ်​နိုင်​သ​လောက်​ မိမိ စခန်း​စောင့်​ Unit ကို ဝယ်​ထားပါ။
စစ်​အင်​အားကြီးနိုင်​ငံတစ်​ခုက နိုင်​ငံငယ်​​လေးတစ်​ခုကို တိုက်​ရင်​နိုင်​မယ်​မှန်းသိတယ်​။ သို့​သော်​ ထိုနိုင်​ငံငယ်​​လေးက တစ်​​ယောက်​ကျန်​တဲ့အထိ တိုက်​​နေမယ်​ဆိုရင်​​တော့ စစ်​အသုံးစရိတ်​နဲ့ ပြန်​ရတာနဲ့မကာမိမှာမို့ မတိုက်​​တော့ပါဘူး။
#drugwar #game #partiko
Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have receiveda24.84% upvote from us for your 3040 Partiko Points! Together, let's change the world!
uthantzin (59)3years ago
ဒီလိုလေး ရေးပေးတော့ ပိုပြီးသတိထားလို့ရတာပေါ့အစ်ကို။မနေ့က စစချင်းရက်ဆိုတော့ စစ်အင်အားကလည်းမရှိသေးတော့ လာတိုက်ကြတာ နည်းနည်းတော့ပါသွားတယ်ဗျာ။အခုမှ စစ်အင်အားလေး နည်းနည်းဖြည့်ထားရတာပါ။အရင်လိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး drugs ထုတ်ပြီး steemယူနေလို့မရတော့ဘူး။
​ကြောက်​သွား​အောင်​ထုတ်​ပီးမှ upgrade ​တွေတင်​လို့ရမယ်​ ဒါ​တောင်​ သိပ်​အများကြီး စုရခက်​ပီ
kachinhenry (67)3years ago
Myanmar Drug Lord
39.419 STEEM from daily
20.186 STEEM from heist
First transfer was before 16.98 days.
Your ROI per day is 5.91 % and you are earning approx. 3.78 STEEM per day.